Shiinaha kartoo dahaaran bacaha qado soosaarayaasha, shirkado cusub, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Bac qadada > Bacaha qadada ee dahaaran
1) Waxay ku hayn doontaa qadadaada heerkulka saxda ah illaa afar saacadood. Waxay leedahay 5 qaab oo qurux badan, mid walboo u eg shandad gacanta, oo wuxuu ku leeyahay jeeb dheeri ah xagga hore, kaasoo ku habboon kaydinta maacuunta ama gogosha.
Bacda qadada ee haweenka
1. Hablaha guryaha ugu fiican ee qadada boorsada-qalabku ha ahaado mid qalalan:
(1) Waxay ku hayn doontaa qadadaada heerkulka saxda ah illaa afar saacadood. Waxay leedahay 5 qaab oo qurux badan, mid walbana wuxuu u eg yahay shandad gacmeed, wuxuuna ku leeyahay jeeb dheeri ah xagga hore, kaasoo ku habboon kaydinta maacuunta ama gogosha.
(2) Haddii aad raadineyso sanduuq bento oo kooban, markaa xulashadan la awoodi karo ayaa ku habboon.
(3) Iyo boorsada ugu qadada adduunka, bacda qadada moodada ah. Waxaa jira gacan qabasho habboon, iyo tirtirka gudaha waa fududahay in la nadiifiyo.
(4) Cunitaanka dibaddu waa shaqo qaali ah. Cunto waad ku diyaarin kartaa guriga waadna qaadan kartaa si aad lacag badan u keydsato. Si kastaba ha noqotee, inaad ku soo qaadato sanduuqa qadada gacanta kaliya maahan wax aan fiicnayn, laakiin sidoo kale waxay keenaysaa culeys weyn. Nasiib wanaagse, waxaa jira boorsooyin qado ah oo loogu talagalay dumarka. Boorsadan qadada ah waxaa si gaar ah loogu talagalay haweenka, taas oo macnaheedu yahay inay tahay mid la taaban karo iyo mid moodel ah. Xaqiiqdii, waxaa jira mowduucyo iyo naqshado badan oo aad kala dooran karto, waxaana laga yaabaa inaad hesho mawduuc aad jeceshahay inaad jimicsato halkii aad isku dayi lahayd inaad qariso.
(5) Bacaha qadada ee dumarka sidoo kale waxaa si gaar ah loogu isticmaalaa in lagu qaado sanduuqyada qadada iyo cuntooyinka kale. Tan macnaheedu waa inay ku hayn karto sanduuqaaga 'bento' booska saxda ah wakhti kasta, waxayna sidoo kale hanan kartaa waxyaabaha kale ee cuntada la xiriira. Hadda, ka hor intaadan bixin oo aad soo iibsanin bacaha qadada ee haweenka, waxaa jira arrimo muhiim ah oo la tixgelinayo.
(6) Qodobka ugu horeeya ee aad ubaahantahay inaad qiimeyso ayaa ah inaad rabto boorsooyinka qadada ee dahaaran ama kuwa aan caymiska laheyn. Qiimaha shandad aan caymis lahayn badanaa waa ka raqiisan tahay, laakiin waxaa ka maqan muuqaal muhiim ah, oo cuntadaada ka dhigaya mid qabow ama ka sii dheer. Bacaha dahaaran ayaa yeelan doona shaqadan, waxayna sameysaa farqi weyn. Khasaaraha ayaa ah in qiimihiisu inta badan ka sarreeyo.
(7) Naagta mashquulka badan waxay u keeni kartaa boorsada qadada si ay ushaqeyso dhowr jeer usbuucii, sidaa darteed iyada, bacda qadada waxay lamid tahay boorsada labaad. Boorsooyinka qadada ugu fiican ee haweenku waa kuwo shaqeynaya oo muuqaal leh.
(8) Waxaan u qaabeynay bacaha bento naqshadeeye ee ugu wanaagsan dumarka, kuwaas oo kaliya aan ahayn kuleylka kuleylka laakiin sidoo kale moodada ah. Kuleylka ayaa ka dhigeysa in cuntada kulul diirran iyo cuntada qabow qabow. Qaybta ugu fiican? Gelinta waa la saari karaa waana lagu dhaqi karaa mashiinka ama waa lagu dhaqi karaa gacanta.
2. Bacda qadada ee haweenka product parameters (specifications)
Daabacaadda marada Oxford
Isboortiga dibedda, firaaqada, safarka
4. Bacda qadada ee haweenka packaging and delivery
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 40 * 23 * 5cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 90cm X 50cm X 70cm. 90PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 28Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 26Kg.
(7) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadayn doonaa baakadka boorsadaan baseball-ka ah iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
(8) Haddii aad u baahato shaybaarka boorsadan baseball-ka ah, waxaan dooran doonnaa inaan hawada kuugu soo dirno.
(9) Waxaan qaabeyn karnaa qaab baakad dhaqaale badan, laakiin tani waxay hureysaa waxyaabo qaar waxayna sababi kartaa isbadal muuqaalka sheyga. Guud ahaan kuma talineyno macaamiisha inay adeegsadaan qaabkan.
Q3: Ma leedahay xad MOQ ah?
Q5. Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
Q6. Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaaminta wax soo saarkaaga? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
Q7: Ma dooneysid naqshadeynta wax soo saarkayaga, ma sameyn kartaa waxna waad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
Jawaab: 500-1000 wareegga wax soo saarka wareegga 30-35 maalmood
Calaamadaha kulul: Bacaha qadada ee dahaaran, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka